Ciidamada Dowladda Oo Howlgal Burburin Ah Ka Sameeyey Baardheer, Gedo – Goobjoog News
Ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxay holwgllo burburin ah ka sameeyeen qaar ka mid ah xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Baardheere ee gobolka Gedo.
Ciidaman oo watey gaadiidka cagafta loo yaqaan ayaa burburin kula dhaqaaqay dhismeyaal badan oo la sheegay in si sharci darro ah looga dhisey waddooyinka degmadaasi.
Taliyaha ciidamada Booliiska degmada Baardheere Gaashaanle Cabdi Sheekh oo la hadlay Goobjoog News ayaa sheegay in guryo badan ay dumiyeen, kadib markii shalay ay ku ekeyd waqti loo qabtay dadka dhistay meelaha sharci darrada ah.
“Annaga howlgal ballaaran baan saakay sameynay, waxaan ku guuleysannay inaan burburinno guryo badan oo qaab sharci darro ah loo dhistay, ilaahay mahadiisa, dadkuna wey nagu taageereen howlgalkaasi” ayuu yiri taliyaha.
Sidoo kale Taliyaha ayaa sheegay in maalmaha soo aadan ay wadi doonaan howlgalkaan inta degmada Baaardheere laga suulinayo guryaha sida sharci darrada ah loo dhisay waa sida uu hadalka u dhigaye.
Qaar kamid ah shacabka degmada Baardheere ee guryahooda la burburiyey ayaa sheegay in si sharci darro ah looga dumiyey guryahooda iyagoo ku baaqay in dowladda ay arrinkaasi wax ka qabato.
Wllaur xfjrlm Generic cialis otc cialis
Upfpoc xiakfg Viagra brand cialis 20 mg price walmart
Lnsmuc sevtfm buy tadalafil how to get cialis
Uastyo hjbiry cialis online canada pharmacy
Omatla wbwahy Best price viagra pharmacy online
Lzdzmz fqrypr generic viagra india...
order viagra uk paypal buy viagra order cialis 10 mg cena ap...
Abhnhw rvgyuf buy viagra on internet...
Dzgkan bvrour buy viagra brand...
viagra prescription online viagra coupons 75% off online doc...